Ma jiraan wax istaraatiijiyado ah oo loogu talagalay Twitter SEO?
Sanadkii 2017, SEO wuxuu u kicitimay kanaalka weyn ee suuq-geynta. Maanta, dayactirka mashiinka raadinta ma ahan kaliya helitaanka khayraadyada ay ku jiraan mashiinnada raadinta. Si aad u fahamsan tahay waxa SEO ku saabsan yahay, waa inaad marka hore fahamto sida siyaabo badan oo warbaahinta bulshada saameyn ku yeelan karto SEO.
Waxaa mar horeba la xaqiijiyay in hawlaha warbaahinta bulshada ay qayb muhiim ah ka yihiin darajada bogga sare. Calaamadaha bulshada ayaa xitaa kordhin kara darajooyinka SEO-gaaga.
Wuxuu u shaqeeyaa sidan soo socota: xajmiga bulshadaada iyo ka qaybqaadashadeeda waa tusayaal qiimo leh oo ku saabsan qiimaha iyo tayadaada. Waxyaabaha intaa ka sii badan, waxyaabaha laga helo warbaahinta bulshada ayaa badanaa muujiya natiijooyinka raadinta Google. Taasi waa sababta aad u weyn, diiradda Twitter ka dib iyo la qabsashada waxyaabaha aad calaamad u leedahay aad bay faa'iido u tahay ganacsigaaga.
Sidaa darteed, maanta, khabiirada Semtalku waxay kuu sheegi doonaan talooyinka ugu waxtarka leh ee aad u baahantahay SEO-gaaga. Ku darso ficil ahaan si aad u korto waxyaabaha soo socda iyo ganacsigaaga.
Twitter 'Essentials SEO Essentials Waa inaad ogaataa
1. Horumarinta Istaraatiijiyada SEO ee waxtarka leh
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad sameyneyso waa abuuritaanka qorshe istiraatiiji ah oo guul leh. Xeer ahaan, istaraatijiyadu waxay ka bilaabmaan ujeedooyinka guud. Qeex qeexidaada ugu muhiimsan adiga oo go'aaminaya nooca natiijooyinka aad filayso inaad isticmaasho Twitter-ka suuqgeynta. Malaha, waxaad ku dadaaleysaa inaad kor u qaado wacyigelinta caanka ah, iibiso adeeg cusub ama kordhinaysa taraafikada taraafikada?
Marka la sameeyo adiga oo ogaanaya ujeedadaada, tallaabada xigta waa in la doorto oo tijaabiyo xeeladaha ugu habboon ee lagu gaarayo hadafyadaas.
2. Fiirinta Voice's Brand
Xasuuso: tweet kasta wuxuu ka tarjumayaa astaantaada. Taasina waa sababta ay posts waa in ay had iyo jeer ku kalsoonaan doonaan codkaaga codka, oo ka dhigan aqoonsigaaga. Hubi inay rafcaan u yihiin dhagaystayaasha bartilmaameedka.
Waxyaabaha kale ee muhiimka ah waa edebinta - beddel fariimahaada kuugu soo qora kaliya calaamadaha, laakiin ilaa 100% hubin in tweet kasta uu faahfaahin doono faahfaahin kasta oo aad rabto inaad la wadaagto macaamiisha.
3. Si joogta ah u kobcinta Beesha
Ma jirto wax diidaya cabbirkaas arrimahan. Si kastaba ha noqotee, marka ay timaaddo Twitter, ka qaybgalashadu waa boqor. Samee kuwa raacaya sheekadaada, laakiin isku day inaad ka fogaato xeeladaha raqiiska ah - iyagu maaha kuwo u qalma maalgashiga.
Halkii laga bilaabo bilawga kubbadda oo ku sii wado dhaqdhaqaaqa labadaba: taageerayaasha hadda iyo kuwa suurtagalka ah. Ka bilaw inaad abuurto wax qiimo leh oo dadku rabaan inay la shaqeeyaan oo wadaagaan. Waxyaabaha kale waa in ay noqdaan kuwo jawaab leh - ka jawaab su'aalaha dadka iyo faallooyinka, ka jawaab farriimaha tooska ah. Ha iloobin in aad retweet kasta ka hadasho, adigoo ku daray qoraaladaada.
4. Xulashada ereyada saxda ah
Waa mid aad muhiim u ah inaad ka dhigto mid sahlan inaad hesho. Waa inaad ku daaweysaa boggaaga sida mashiinka raadinta. Isku day in aad isticmaasho ereyada muhiimka ah ee ku jirta marxalado kasta. Ha ilaawin asxaabta, bio, iyo sawirada - waxay kaloo kaa caawin karaan boggaaga Twitter.
Xasuuso, xaaladaha badankood, dadku waxay raadinayaan Twitter-ka erayada muhiimka ah. Sidaas awgeed, hubi in xisaabtaada ay muujiso wixii ku habboon ganacsigaaga.
5. Raadinta Taraafigaaga Twitter
Sida ay yiraahdaan, maxay tahay tallaabooyinka aan korin. Wali ma soo jeesteen falanqaynta Twitter? Markaa waxaad u fiicnaan kartaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagal ah si aad u hesho muuqaal deg-deg ah oo ku saabsan sida aad u sameyneyso iyo si aad ula socoto isbuucii usbuuc.
Google Analytics ayaa sidoo kale kuu sheegi kara inta jeer ee booqashooyinka bogga aad ka heleyso Twitter. Aqoontani waxay ku siinaysaa dareen ah inta goor ee baabuurtaada loo marin karo Twitter.
Sida aan ognahay, Twitter waa meel aad u badan. Abuuri fariimo kaa dhigi kara inaad ka fogaato tartanka. Xifdaddaada ha ahaato mid sahlan oo sahlan in la akhriyo. Iskusoo wada duuboo, samee wax ku ool ah oo faa'iido leh, sababtoo ah taasi waa sida Twitter SEO u shaqeeyo Source .